ဆွစ်ဇလန် | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဆွစ်ဇလန်
ဆွစ်ဇလန် ‘ Interlaken, Zurich, စိန့်. Moritz and Geneva
The Alps isamajestic and world famous mountain range that is divided into the Western and the Eastern Alps. A breathtaking place to spendavacation, this mountain range provides stunning views as well as recreational facilities such as winter sports like skiing. The Western Alps, which are the higher of the mountains, are located in European destinations such as Italy, ပြင်သစ်, and Switzerland. The broader and longer Eastern Alps can also be found in Italy and Switzerland a...
နယူးဇီလန်? Think Hawaii meets Switzerland. Where else can you find so many different types of scenery and breathtaking landscapes in one country! From towering mountain peaks and glaciers to volcanoes and bubbling mud springs. And then there's the surprise. It's so very English too.
Ever wonder what it would be like to experience life in Germany? If you want to experience the culture of the historical cities of Germany, it isagood idea to look at the points of interest in the many cities before you go so you can pick out the highlights you are most interested in seeing. Berlin As the Capitol of Germany, Berlin is rich in culture, architecture and nightlife. The city is covered with parks, မြစ်တွေ, greenery and bridges. Partake inawalking tour to...
10 အဆိုပါဘဏ်သည်ကိုချိုးမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ခရီးသွား Adventures ကို
Dreaming of takingaBig Trip in 2007? Financesabit tight? ကောင်းစွာ, takealook at the following destinations. Magic, thrills and adventure, ဟုတ်ကဲ့. But for the budget-conscious globe-trotter, what’s equally important is that these are places where your dollars will stretchalong, long way. Asatravel writer, I’m lucky enough to have experienced all 10--but I’d love to revisit every single one asavacationer. Vietnam Vietnam packsalot into its borders. Highlights in...
The alps areapopular winter travel destination. Skiing, စနိုးဘုတ်စီးခြင်း, ice skating and other winter activities abound throughout the mountainous area. The Alps are shared among many countries, including Austria, ပြင်သစ်, German, Italy and Switzerland. Whether you are looking forafamily vacation or are more adventurous and enjoy mountaineering and extreme skiing, you will find something for every one in this area. Family Resorts in the Alps Many resorts throughout t...
ကော်စတာ Blanca မိုးလေဝသစေရန်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်
အဆိုပါကော့စ Blanca ရာသီဥတုပျော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စပိန်၏အားလုံးအတွက်ခြောက်သွေ့ဆုံးဒေသများ၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဤဒေသ၏တောင်ပိုင်းတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, Alicante အောက်ကဧရိယာ, အဆိုပါ mildest နှင့်ခြောက်သွေ့ဆုံးရာသီဥတုရှိပါတယ်. တောင်ပိုင်းဒေသနှစ်စဉ်နေရောင်ခြည်၏အကြောင်းကိုသုံးရာရက်ပေါင်းအတော်ပင်. ဤဒေသတွင်ရာသီဥတုသင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ကောင်းလှ၏. တကယ်တော့, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဒီဧရိယာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးခြုံငုံရာသီဥတု၏တဦးတည်းရှိကြောင်းပြောပါတယ်. ဒါကအပေါများနေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ...
Aviemore စကော့တလန်၏ကုန်းအခြေစိုက်, အထင်ကြီးစရာတောငျကိုအမြင်များနှင့်အတူ, ထိုသို့ရပ်တည်တိုင်းပြည်-နားမှာဝိုင်းရံ 26,000 ခြေဘဝါးကျေးလက်လယ်ယာမြေအထက်. အဆိုပါဧရိယာနှင်းလျှောစီးအဘို့အကျော်ကြားဖြစ်ပါသည်, မကြာသေးမီကခဲ့ဘဲလျက်2ပြီးခဲ့သည့်နှစ်လအတွက်၎င်း၏နှင်းဖုံးထိပ်ပေါ်ဥရောပအဆင့်ပြိုင်ပွဲများ.
Dreaming of takingaBig Trip in 2007? Financesabit tight? ကောင်းစွာ, takealook at the following destinations. Magic, thrills and adventure, ဟုတ်ကဲ့. But for the budget-conscious globe-trotter, what's equally important is that these are places where your dollars will stretchalong, long way. Asatravel writer, I'm lucky enough to have experienced all 10--but I'd love to revisit every single one asavacationer. Vietnam Vietnam packsalot into its borders. Highlights in...
“တာဂိုနီးယား၏ Peak & ချီလီစပျစ်ဥယျာဉ်”
ပါတယ်သူကိုစစ်မှန်တဲ့ Venture များအတွက် "ထိုပြုသောအမှုန့်," ကမ္ဘာ၏အရှိဆုံးတောင်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်နောက်ဆုံးတောမှယခုလာ. ဤသည် 11 ရက်ကြာလေ့လာရေးခရီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သာယာလှပအံ့ဘွယ်သောအမှုပေး. ယူနက်စကိုအမျိုးသားပန်းခြံထဲမှာအကြှနျုပျတို့မီးတောင်ကိုမြင်လျှင်, အဲလ်ပ်တောင်တန်း, ကျောက်သလင်း fjords, ချောက်ကြီးများ, Heather ၏လယ်ကွင်း, မြမြစ်များ, သစ်ခွနှင့်ရေခဲမြစ်တိုင်မြင့်မားသော 8000 '' ထိုးခြင်းနှင့်တောရက်စ် del နာကျင်မှုများနှင့်အကြီးအ Grey က Glacier ရဲ့နာမည်ကျော်သောတောင်ပေါ် massifs.
M'ribel အားလုံးညာဘက် boxes တွေကိုလူမိုက်ကံကောင်းမှတ်မိဖို့ဇိမ်ခံနှင်းလျှောစီးအားလပ်ရက်များအတွက်. အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်း၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ, အဆိုပါ Troy Vall'es အလယ်၌ M'ribel ၏ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းရပ်. M'ribel ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနှင်းလျှောစီးဧရိယာကမ်းလှမ်းတစ်ဦးကဂန္ Wintersports ဦးတည်ရာ. အဆိုပါ Troy Vall'es ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှင်းလျှောစီးနှင့်စနိုးဘုတ်စီးခြင်းနိူးဘို့ပြေး၏ 600km ကျော်ရှိပါတယ်. Couchevel, က Les Menuires, Val Thorens, la Tania နှင့်စိန့်မာတင်လူအပေါင်းတို့သည် M ကနေတုန်းအဆိုပါအပန်းဖြေစခန်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆက်စပ်နေကြသည် ...
ဆွစ်ဇလန် – Interlaken, Zurich, စိန့်. Moritz and Geneva
To me there is no more fun than traveling in Europe onaself guided trip without an itinerary. Be warned it is not for the faint of heart-just wait until you get stuck inatraffic circle somewhere and can't figure out which way is left. Unless you have been to Europe before it is best to go onatour or findatravel agent you really trust.
The official name of Switzerland is the Swiss Confederation. If you are considering visiting Switzerland, you should know something about the country.
Luxury Ski Holidays in the Matterhorn Valley of Cervinia, Italy offer some of the most superb skiing in the Alps. Cervinia isahigh altitude resort at 2000 မီတာ, dominated by the mighty Matterhorn, with reliable snow conditions throughout the Winter from December right through to April. The long, open runs and easy gradients of Plateau Rosa are ideal for advanced beginners and intermediates from which you can enjoy some fantastic views. More advanced skiers can head to Val...
ခရီးသွားလာလူတိုင်းတစ်သက်တာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်. သော်လည်း, ကဥစ္စာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမပါလျှင်, ပြီးနောက်သင်ပျောက်ဆုံးနေတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ရှိပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ရုံအဘယ်ကြောင့်နယ်လှည့်လူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားသင့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်သင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး.
ခရီးသွား Channel ကိုဖွင့်ခင်မာဘရောင်းသူမရဲ့ထိပ်တန်း Pack သိကောင်းစရာများမျှဝေ
အခွင့်အလမ်းတွေကိုစနစ်တကျထုပ်ပိုးနေကြသည်အောင်သို့မဟုတ်ကိုချိုးဖျက်သင်၏နောက်အားလပ်ရက်မည်မဟုတ် - သင်အဓိကတစ်ခုခုမေ့လျော့မဟုတ်လျှင် - ဒါပေမယ့်နေဆဲသင်ထင်ထက်သာယာသောခရီးဖို့ပိုအရေးကြီးနိုင်.
ဗြိတိသျှအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson
Summer 2007 Vacation Adventures ‘ Maroon Bells-Snowmass Wilderness
အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်ရောမမွို့ရှိ bargain နှင့်ဘယ်လိုသူတို့ကိုရှာပါရန်
Odaiba – တိုကျိုရဲ့ Visited